कुकि Rec रेसिपीहरू वास्तविक वेबसाइट ब्लगको एक वेबसाइट हो। हाम्रो वेबसाइट समर्पित छ ग्यास्ट्रोनोमी को संसार, र यसमा हामी खाना पकाउने र खानासँग सम्बन्धित सबै कुराको बारेमा कुरा गर्दा मूल डिशहरूको विचार प्रस्ताव गर्छौं।
El कुकरी व्यंजनहरु को सम्पादकीय टीम यो बनेको छ भावुक खाना तपाईं संग तिनीहरूको विशेषज्ञता र कौशल साझा गर्न पाउँदा खुशी। यदि तपाईं पनि यसको अंश बन्न चाहनुहुन्छ भने, नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई यो फारम मार्फत लेख्नुहोस्.
म सानो छँदादेखि खाना पकाउनु मेरो एक शौक भएको छ र मैले मेरी आमाको गधाको रूपमा काम गरें। यद्यपि यो मेरो हालको पेशाको साथ सानो कुरा हो, खाना पनी मलाई धेरै राम्रो क्षणहरू प्रदान गर्न जारी राख्छ। मलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खाना पकाउने ब्लगहरू पढ्न मन पर्छ, भर्खरको प्रकाशनहरूको साथ मिति राखेर मेरो परिवारसँग र अब तपाईंसँग मेरो पाक प्रयोगहरू साझेदारी गर्दै।
मलाई खाना पकाउन मन पर्छ, यो मेरो शौक मध्ये एक हो, त्यसैले मैले आफ्नो ब्लग, मोन्टसेको साथ कुकिंग शुरू गरें, जहाँ म दैनिक जीवनका लागि व्यंजनहरू सजिलो र सरल ढ share्गले साझेदारी गर्दछु र मजा लिन्छु।
राम्रो खानाको प्रेमीको रूपमा, म आफूलाई सामान्य रूपमा खाना पकाउने फ्यान घोषित गर्छु। उत्पादनहरूको चयन र स्वादहरूका मिश्रणमा, म दैनिक रचनात्मकताको मेरो क्षण पाउँछु। यहाँ म मेरा मनपर्ने पकवानहरू र व्यंजनहरू साझा गर्दछु, परम्परागत खाना र अन्तर्राष्ट्रिय भोजनको मिश्रण।
मलाई खाना पकाउन मन पर्थ्यो जबदेखि म एउटा बच्चा थिएँ, वर्तमानमा म आफ्नै व्यञ्जनहरू बनाउने र वर्षौंको दौडान मैले सिकेका सबै चीजहरूमा सुधार गर्न समर्पित छु, मलाई आशा छ कि तपाईं मेरो व्यञ्जनहरू पनि तपाईंलाई मनपराउनुहुन्छ जस्तो तपाईंलाई पनि बाँड्न चाहन्छु।
मेरो सँधै खुला दिमाग र सिर्जना गर्न पूर्वानुमानले मलाई अब भान्छाको संसारमा डोर्याएको छ। मलाई आशा छ कि तपाईं मेरो व्यञ्जनहरू मनपराउनुहुनेछ र अभ्यासमा राख्नुहुनेछ। तिनीहरू स्वादिष्ट छन्!
ढिलो खाना पकाउने र गिन्नी बियरको एक सहायक, म लामो समयदेखि औंला चाट्ने व्यंजनहरू तयार गर्दैछु। परम्परागत, आधुनिक, म केहि गर्न हिम्मत गर्दछु! नयाँ स्वाद प्रयोग गर्दै र प्रयोग गर्दै, म आशा गर्दछु तपाईंले मेरो व्यंजनहरू तिनीहरूलाई बनाउनु भए जस्तै मनपराउनुहुनेछ।